Rosia : Mahakasika Ny Tena Manokana Misy Mamoaka Antsokosoko , Iza No Homena Tsiny ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2011 13:17 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
Ny 03 Oktobra 2011, antotan-taratasinà teratany Rosiana maro, ao anatin'izany ny taratasim- bola ary laharanà pasipaoro, no nakarina tao amin'ilay vohikala rusleaks.com [ru].
Ny tranonkalam-baovao Rosiana Vedomosti dia nanoratra fa ny roa amin'ny mpiasa ao aminy no nahita ny momba azy ireo manokana tao [ru]
Nanambara ny governemanta Rosiana fa ny fampakàrana lahatsoratra tahaka izany dia mandika ny lalàna mifehy ny mombamomba ny tena manokana ao anaty aterineto. Ny birao ny Fampanoavana dia nameno taratasy halefa ho an'ny tribonalin'ny tanànan'i Mosko mikasika io tranga io (raha maharesy ny Mpampanoa lalàna, dia hakatona ho an'ireo mpampiasa io vohikala io ao Rosia) sady nangataka [ru] tamin'ny BS Corp (registrat mpivarotra anaran-tsehatra izay mampiantrano ihany koa ny rusleaks.com) mba hampiato ny famandrihan'izy io.
Tamin'ny karazana tranga roa ihany no nanapahan'ny governemanta hevitra ny hampiasa fijirihana sehatra : ho an'ny vohikala sochi.ru sy ny torrents.ru, ilay vavahadin-tserasera torrent Rosiana lehibe indrindra, izay nakatona ny taona 2010 noho ny fandikana ny artikla 146 ao amin'ny fehezan-dalàna Rosiana famaizana heloka bevava.
Ilay sampan-draharaha koa dia nilaza fa ny sasany amin'ireo mombamomba ny tena, izay nihanaka ny taona 1999 hatramin'ny 2007 dia mety nisy nanao hosoka [ru].
Ny fanadihadiana iray [ru] nakarin'ilay vohikala Habrakhabr no naneho fa 67,55 isan-jaton'ireo natao fanadihadiana ireo dia nanaiky fa:
Maro ireo mpitondra fanehoan-kevitra no nanavaka ny Rusleaks sy ireo rehetra izay nanome vaovao ho an'ny Rusleaks. Mpampiasa iray ao amin'ny CLR no nilaza[ru] fa ilay vaovao dia “tsy nangalarina fa nanaovan'ireo olona izay manana alàlana hiditra ao risoriso”, ary nanamafy izy fa tena tokony ho saziana ireny olona ireny fa tsy ny vohikala izay mampakatra ilay lahatsoratra ihany.
Ilay mpampiasa Himari nilaza fa [ru] :